Myanmar Defence Weapons: တပ်မတော်နေ့မှ ဖြစ်ပေါ်လာသော အတွေးစများ
Posted by MM at 4:21 PM
yannaing soe March 28, 2013 at 12:12 AM
သည်နှစ်ကျင်းပသွားတဲ့ တပ်မတော်နေ့အခန်းနားက ထူးခြားမှူတော့ရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့ သိပ်ပြီးအားမရလှပါဘူးဗျာ ကျွန်တော်တို့ စစ်သည်တော်တွေက ၀ဖြိုးနေဖို့တော့လိုပါနယ်...း)
Mikey March 28, 2013 at 12:25 AM
Very impressive.. thanks for the awesome pics...
Myanmar military is providing its troops with better trainings and better equipments, but I'd also like to see properly nourished troops. The military should setaslice of its budget to feed the well deserved troops.
There isabig mental and physical difference between an under-fed (under nourished) soldier andawell-fed (properly nourished)soldier.
Tun Tun Ko March 28, 2013 at 1:58 AM
ကို MM ရေ ကျေးဇူးအထူးပါခင်ဗျ။ ကျွန်တော့် page မှာ ရှယ်လိုက်ပြီနော်။ တပ်မတော်ကြီးအင်အားရှိနေတာကို စစ်တပ်ချစ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့အရမ်းပီတိဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပေါ်က Comment မှာ Mikey ပြောသလို Well Fed Soldiers ဖြစ်ရင်ကောင်းတာပေါ့ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတော် က Well Fed လုပ်ထားတယ် ဆိုတာတော့ ယုံသဗျာ ဟိုကဖြတ် ဒီကအုပ် မလုပ်ရင် ရဲဘော်တွေ အရာရှိငယ်တွေ ခန့်ခန့်ညားညားတော့ ရှိလာမှာပါ။ တော်လှန်ရေး Prade မှာဆိုတော့ အရမ်းမောင်းမှာလေ ကောင်းကောင်းမကျွေးထားရင် သူတို့ခင်မျာ ဘယ်ခန့်တော့မလဲနော်။ Military Prade ဆိုတာ ချီတက်တဲ့ရဲဘော်တွေကအစ ခန့်ခန့်ညားညား ကြီးဖြစ်ရမှာပေါ့။ အခုတော့ လူပြောစရာဖြစ်လာပြီ ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေဗျာ။ နောက်နှစ်တွေမှာ ပိုပြီးခန့်ညားတဲ့ စစ်လက်နက်တွေနဲ့အတူ ခန့်ညားအားကိုးလောက်တဲ့ စစ်သည်များအဖြစ်ချီတက်နိုင်ကြပါစေ။ တို့ခေတ်တုန်းကတော့ ၅ပေ ၇လက်မ အောက်ဆို မလျှောက်ရဘူး။ကျွေးတာကလည်း ရှယ်ဘဲ။
Eagle info dash March 28, 2013 at 1:59 AM
Donald Lwin March 28, 2013 at 2:58 AM
mike is absolutely right,well fed and energetic soldiers for Burmese arm forces to protect our country.
Aung Nyein Khant March 28, 2013 at 5:04 AM
ကိုmm ရေ ဒီနေ့ မှာ post မတင်ရင် ဝင်မကြညိ့တော့ဘူးလို့
သတိထားမိလား ပြောက်ကျားတွေ အရောင်ကွဲပေမယိ့
helmet တွေက အကုန်လုံး အရောင်တူနေတယိနော်
မြန်မာ့တပ်မတော်ကြီး ပိုလို့ တိုးတက်ပါစေဗျာ
heart rebel March 28, 2013 at 11:00 AM
ရန်ပုံခွင်း သွေးသောက် March 29, 2013 at 9:00 AM
အရပ်တွေတန်းညှိပြီး စစ်ရေးပြအတွက် ပြင်ဆင်ခဲ့လို့ပါ .......... နောက်ပိုင်းတော့ ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း အရပ်အမြင့်ညီညီညာညာနဲ့ တစ်ဝကြီး ကြည့်ရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျ ..................
Thit sar March 30, 2013 at 1:00 AM
zawhein April 4, 2013 at 4:44 AM
တင့်ဖျက် တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ် က ပြင်သစ်က မာလီစစ်ပွဲမှာသုံးတာမြင်ဖူးတယ်
zinnwe phyo April 22, 2013 at 7:50 PM
ရဟတ်ယာဉ်နဲ့လေယာဉ်တွေနည်းနေတယ်ထင် တယ်ထုတ်မနိုင်သေးရင် လည်းနောက်ဆုံးပေါ်ဝယ်ပါ 4.5မဝယ်နဲ့5ပဲဝယ်စေချင်တယ် ရုရှားက2မျိုးကမိုက်တယ်
aung thankyaw May 5, 2013 at 7:26 PM
ရဲသစ်သွေး May 11, 2013 at 5:24 AM